Utholakale enecala uKarim Benzema ngemuva kokuzama ukuqola omunye wabadlali | Scrolla Izindaba
Utholakale enecala uKarim Benzema ngemuva kokuzama ukuqola omunye wabadlali
Umgadli we-Real Madrid, uKarim Benzema, utholwe enecala lokuzama ukuqola esebenzisa ividiyo yocansi yowayengumdlali weqembu lakhe uMathieu Valbuena.
Lo mdlali wase-France unikezwe isigwebo sonyaka owodwa ebhadla ejele kanye nenhlawulo yesigidi esi-1.4 samarandi. Ummeli walo mdlali uthe iqembu labo lizosidlulisela phambili isinqumo esithathwe yinkantolo yase-Versailles.
“Lo mphumela awuhambisani neze neqiniso lezehlakalo,” kusho ummeli u-Antoine Vey etshela izintatheli kulandela ukuqulwa kwecala.
UBenzema akazange avele enkantolo njengoba ezakhe i-Real Madrid zizobhekana ne-Sheriff Tiraspol ngoLwesithathu ebusuku emdlalweni owandulela owamanqamu we-UEFA Champions League. UValbuena naye ubengekho ekuqulweni kwecala ngoLwesithathu mhla zingama-24 kuLwezi.
UBenzema ubengomunye wabahlanu abaquliswe icala kusukela ngenyanga edlule, kanti bonke bebekwe icala lokuzama ukuqola uValbuena imali.
Iziphathimandla zaphikisana ngokuthi uBenzema wancenga owayesebenza naye e-Marseille uValbuena ukuthi akhokhele iqembu lalabo abafuna ukukhipha ividiyo ukuze ingaphumeli esidlangalaleni ibonwe abantu.
Abashushisi bathi uValbuena waqala ukuthola izingcingo ezisabisa ngokudalula le vidiyo kwabezindaba ngonyaka wezi-2015. Lo mdlali wasesiswini we-Olympiacos uthe kuyacaca ukuthi laba abebefona bebefuna imali ngesigameko esamshiya enovalo okungaholela ekutheni aphelelwe umsebenzi.
Inkantolo yengeze ngokuthi uBenzema ubesebenzisana nabasolwa ngokuzama ukuthi uValbuena abakhokhele imali edingekayo ukuze le vidiyo ingabonwa ngabezindaba.
UBenzema noValbuena balahlekelwe izindawo zabo eqenjini lesizwe lase-France ngenxa yevidiyo eyihlazo.
Lo mgadli we-Real Madrid nokho uzuze indawo yakhe eqenjini lesizwe lase-France ekulungiseleleni umqhudelwano wakulo nyaka wase-Europe.
Ngokungafani nozakwabo weqembu, uValbuena akaphindanga wathola indawo yakhe ohlangothini lokuwina indebe yomhlaba. Ngesikhathi kuqhubeka icala uthe ibhola liyimpilo yakhe kanti lesi sigameko sikhinyabeza amathuba akhe okudlala eqenjini lesizwe.
“Ngangazi ukuthi uma leyo vidiyo ingaphuma kuzokwenza izinto zibe nzima eqenjini lase-France,” kusho uValbuena.
Umthombo wesithombe: @ESPN